Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်)
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နာတာရှည်လေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့တွဲအတူ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အဆုပ်ရောဂါနဲ့တွဲတဲ့ လေပြွန်ရောင်ရောဂါ မတွဲတဲ့လေပြွန်ရောင်ရောဂါစတဲ့လေလမ်းကြောင်းအကန့်အသတ်များရှိခြင်းတွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးရုံလိုမျိုး ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ ကုသမှုကိုစတင်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ပမာဏနည်းနည်းနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်တဲ့ beta-agonist bronchodilator လေပြွန်ကျယ်ဆေးလိုဆေးမျိုးကိုတော့ အိမ်မှာပဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အခြားအချက်တွေကြောင့် nebuliser treatmentလေပြွန်ကျယ်ရှူဆေး လိုအပ်နေသူတွေလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ စမ်းသပ်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့လူနာတွေမှာ ပမာဏအများကြီးလိုပါတယ်။
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ ပမာဏကိုညှိတာတွေ အခြေအနေပြင်းထန်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ပမာဏတဖြည်းဖြည်းလျှော့တာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Berodual® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ချက်ချင်းသက်သာနိုင်ဖို့ 1 mL (20 drops)
ပြင်းထန်ဆိုးရွးမယ်ဆိုရင် 2.5 mL (50 drops)အများဆုံး4mL (80 drops)
ကလေးတွေအတွက် Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၆နှစ်ကနေ၁၂နှစ်ကလေးတွေအတွက် ချက်ချင်းသက်သာနိုင်ဖို့ 0.5-1 mL (10-20 drops)
ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေအတွက်2mL (40 drops)အများဆုံး3mL (60 drops).
Berodual (ဘီရိုဒူရယ်လ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ရှူဆေး 20 ml